ဘုရားရောက်ဖြစ်ခဲ့ တယ်။ ညနေတိုင်း ဘုရားပေါ်တက်ဖြစ်တယ်။ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ကင်မရာလေးကိုင်လို့တွေ့ တာတွေတော့ရိုက်တာပါပဲ။ ဘာမှမရိုက်တတ်တော့ ပုံကောင်းတခုမှမရဘူး။ ဒီပုံကတော့ တိုက်ရဲ့ အပေါ်ဆုံးခေါက်မိုးပေါ်တက်ပြီရိုက်ထားတာ။ ပုံတွေကတော့ အများကြီး ။ သူများပုံတွေကြည့်ပြီးတော့မှ ငါဘာလို့အဲလိုတွေမရိုက်ခဲ့ မိဘာလိမ့် လို့နောင်တရမိတာ အကြိမ်ကြိမ် ။ ဆုလား .......ဘုရားရောက်တိုင်း ဘာဆုတောင်းရမှန်းမသိဘူး ။ အဖေနဲ့အမေ ကျမ်းမာပါစေ လူနတ် ဗြဟ္မာ သတ္တာဝါအပေါင်း ကျမ်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့ တော့ ဆုတောင်းဖြစ်တယ်။ ပြန်လာခါနီး ဘုရားဈေးတန်းက ဖုန်းထည့်တဲ့အိပ်လေးတွေ လက်ဆောင်ပေးဖို့ ဆိုပြီး ဝယ်ဖြစ်ခဲ့ သေးတယ်။ ခုထိတော့ ဘယ်သူ့ မှမပေးဖြစ်သေးဘူး ။ သိမ်းထားဆဲပါ ။
ဒီပုံလေးက ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ရိုက်လိုက်တာပါပဲ ။ ပုံတွေပြန်ကြည့်တော့မှ ထူးခြားနေတာတွေ့ ရတယ်။ အဲဒါက ခေါင်းလောင်းတစ်လုံးအပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ရုပ်တုလေးတွေ။ တခါတလေမှာ ကိုယ်သတိမထားမိတာတွေက ထူးခြားမှုတွေ ရှိနေတတ်တယ်လေ။ ကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့ အချိန်မှာ ခံစားမှုတချို့နက်ရှိုင်းနေခဲ့ တယ်။ ဒီလိုပါပဲ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အိပ်မက်တွေနဲ့ ပေါ့။ အခန်းကျဉ်းလေးထဲ ရူးသွပ်နေတယ်လို့ခနခနအိပ်မက်မက်တယ် ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော့်ကို မနိုးပါနဲ့ ။
အဲဒီနေ့ က ဖုန်းကဒ်သွားဝယ်တာ ကင်မရာကိုယူသွားတယ်။ ဖိုခနောင့်မပါဘူးလေ ။ ဒါပထမဆုံးစမ်းကြည့်တာ ။ ပုံပေါင်းများစွာရိုက်ရာ ဒီတစ်ပုံသာရလိုက်သည်။ အချိန်နာရီဝက်လောက်ကြာသွားတယ်။ ဆရာတွေကတော့ သိတာပေါ့ ဘာမှကိုမဟုတ်တဲ့ ပုံ။ ဒီလိုပါပဲ တဆင့်ပြီးတဆင့်ပြီးတက်ရမှာပေါ့ ။ လိုချင်တာတွေရှိသည် ။ လိုအပ်တာတွေရှိသည် ။ သတိရတာတွေရှိသည်။ မေ့လျော့တာတွေရှိသည်။ မပြောဖြစ်တာတွေရှိသည်။ ပြောဖြစ်တာတွေရှိသည်။ အိပ်မရတာတွေရှိသည် အိပ်မဝတာတွေရှိသည်။ ရှိတာတွေ မရှိတာတွေ ဖြစ်တာတွေ မဖြစ်တာတွေ အသာထား နေ့ တဓူဝ စိတ်ချမ်းသာချင်တယ်။ အလွမ်းဖြေနေသည် မနှောင့်ယှက်ရလို့ဆိုတာကို လွမ်းတော့လွမ်းနေတာပဲတဲ့ဘာကိုလွမ်းမှန်းမသိဘူးလို့ သူကဆိုတယ်။ အဲဒီနေ့ က မအီမလည် အီလည်လည်ပါပဲ။ <3>
အနမ်းတပွင့်လို့ပေးလိုက်တယ်။ ပန်းပဲ.....ပျားကနမ်းမှာပေါ့။ အဲဒီနေ့ က ပြင်ဦးလွင်မှာ တစ်ယောက်တည်း ထုံးစံအတိုင်း ဟိုငေး ဒီငေး ။ နေကလဲပူ ချွေးကလဲပျံ ။ ပန်းတွေကတော့ လှနေတာပါပဲ ။ နှင်းဆီလဲပါတယ်။
အလွမ်းသင့်တဲ့ နံနက်ခင်းတဲ့။ တခုခုတော့တခုခုပဲ ဘယ်လိုမှအိပ်မရဘူး။ မျက်လုံတွေကြောင်နေတယ်။ အိပ်ရာထဲဟိုဒီလှိမ့်လို့အိပ်ပေမယ့် မရဘူး။ မိုးလင်းလာပြီလေ မထူးတဲ့ အဆုံး မအိပ်ဘူးကွာဆိုပြီး ကင်မရာကိုင်ပြီး ဘေးနားက ကွန်ဒိုအပေါ်ဆုံးထပ်ကနေ နံနက်ခင်းရဲ့ဝတ်လစ်စလစ် အလှကို အမိအရဖမ်းလိုက်တယ်။ အလွမ်းတွေသင့်နေတဲ့နံနက်ခင်းမို့ခပ်ဝေးဝေးကနေ ခပ်ဆွေးဆွေးလေးလွမ်းဖြစ်ခဲ့ တယ်။ မှတ်ချက် ....ပုံထဲတွင် ထူးခြားချက်တခုကိုရှာပါ ။
ဒီပုံလေးကိုတော့ MIND လို့ အမည်ပေးလိုက်မိတယ် ။ ခံစားကြည့်ပါ။
အေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်။ မေးခွန်းပေါင်းမြောက်များစွာထွက်လာခဲ့ တယ်။ အေးချမ်းသောဘဝဆိုတာ ဘာလဲ ? ဘယ်အရာကို အေးချမ်းသောဘဝဟု ခေါ်သနည် ? အေးချမ်းသောဘဝတွင် မည်သည့် အရာများပါဝင်သနည်း ? အေးချမ်းသောဘဝကို မည်ကဲ့ သို့ တည်ဆောက်မည်နည်း ? အေးချမ်းသောဘဝကို တည်ဆောက်ရာတွင် မည်သည့် အရည်အချင်း အရည်အသွေးများလိုအပ်မည်နည်း ? အေးချမ်းသောဘဝကို ကျွန်ုပ် တည်ဆောက်နိုင်မည်လော ? စသဖြင့်မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ထွက်လာတယ်။ ကျွန်တော် အာရုံနောက်သွားတယ်။ အဲလောက်အထိဥာဏ်မမှီဘူး ။
သထေးတွေများ ချမ်းသာလိုက်ကြတာ ။ ဘာလုပ်လုပ်ကို ဖြစ်နေတော့တာပဲ မရှိတဲ့ သူကြတော့လဲ ဘာလုပ်လုပ် ဘယ်တော့မှ ပိုမလာဘူး ။ ဒါလားလောက ။ ငွေကို ငွေနောက်လိုက်ရင်း မျောသွားကြတဲ့ သူတွေလဲ ဒုနဲ့ ဒေး ။ ငွေနောက်လိုက်ရင်း ငွေဆိပ်သင့်ကြ ငွေရှိရင်လုပ်သမျှဖြစ်တယ်တဲ့ လား ။ ဖြစ်သမျှကိုသာလုပ်ပါကွာ ။လုပ်သမျှ ဖြစ်မယ်လို့ မပြောကြေး။ တမိုးအောက်တည်းနေကြတာခြင်းတူတူတောင် ကောင်းကင်ကအရောင်တွေတူမှမတူကြတာပဲ။ တချို့ ဘဝတွေ ခါးကုန်တော့တာပေါ့။
(ညီမလေး = မြသူဇာအောင်)
မမြင်ရတဲ့ ကြိုးတွေနဲ့ရစ်ပတ်နေတာကို
အင်ဂျင်နီယာကြီးတွေကတောင် သိချင်မှသိလိမ့် မယ်။
အပစ်တင်မှုတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာရလို့ 
ဘယ်သူ့ ကိုမှ မနာကြည်းလိုက်နဲ့ 
အားပေးချီးမြှောက်မှုတွေမရှိလို့စိတ်ဓါတ်မကျနဲ့ 
ထက်မြက်မှုတချို့ ရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့လိုက်နဲ့ 
အဲဒီစကားလုံးတွေက ဟိုးအဝေးမှာမြင်ရတဲ့ 
ရှေ့ ဆက်မယ့်လမ်းကိုသာမှန်း လက်တဖက်ကမ်းလိုက်ပါ။
ကိုယ့်လက်နဲ့ ထာဝရတွဲလို့ ကူမယ်လေ။
နေ့ ရက်တိုင်းမှာ မင်္ဂလာအပေါင်းခညောင်နိုင်ကြပါစေ။
Posted by ဖြိုးမောင်မောင်(CTM) at 12:02 AM
Labels: စာတိုပေစ, ပုံရိပ်, သတိတရ
ရေတံခွန်နဲ့ ပန်းပွင့်ပုံလှတယ်...ညီမလေးတွေလဲ ချစ်စရာကောင်းတယ်...။
ရိုက်ချက်တွေကောင်းလိုက်တာ ကိုဖြိုးရေ။ ဖွဲ့နွဲ့ထားတဲ့ စာသားလေးတွေလည်း လှတယ်။ 'အလွမ်းသင့်တဲ့နံနက်ခင်း' ပုံလေးထဲက ထူးခြားချက်က လူပုံရေးဆွဲထားတဲ့ အုတ်နံရံလား :P
ညီမလေးတွေက ချစ်စရာလေး သနပ်ခါးလေးနဲ့ ...:)))
ဓာတ်ပုံတွေ ရေလည်မိုက်တယ်.. တကယ့် ပရိုကြီးလိုပဲ... အဲ့ဒါကိုဖြိုးညီမအရင်းတွေလား :D :D
ခွက်လေးထဲမှာ ရေတွေပလုံစီနေတာကလွဲရင် ဘာမှထူးခြားချက်မတွေ့ဘူး။ တုံးတယ်နော်းP
ပုံလေးတွေရိုက်တာကောင်းပါတယ်။ ကြိုက်တယ်။ တို့တောင်အဲလောက်မရိုက်တတ်သေးဘူး။
ဘဝရဲ့အေးချမ်းမှုကိုလိုချင်ရင်တရားထိုင် ( သိပ်များဆရာလုပ်မိနေလားမသိဘူးး) )